Jiritaanka waynaha maxaa caddayn u ah? – Kaasho Maanka
In la doodo waxna la is waydiiyo ama wax jira oo aan la hubin dood laga keeno ma xuma, doodaa iyo wax is waydiintu garashaday kabtaa laakiin hab loo doodo ayaa jira. Si aad u doodo waa inaad wax qirta, waana inaad miiska saarta waxa aad ka doodeyso caddayntana waa inaad banaanka ka keenta.
Marka laga doodeyo jiritaanka awood sare ama Illaahay ma jirto cid caddayn karta inuu jiro, sidoo kale ma jirto qaab la taaban karo oo cid u caddayn kartaa inaanu jirin, balse waxa jiritaankiisa lagu burin karaa wixii loo tiiriyay inay isaga ka yimaadeen iyo adeegsiga garashada.
Maanta oo aan joogno qarniga 21aad uma fekereyno siday u fikiri jireen dadkii noola qarnigii toddobaad, baahiyihii ay qabeenna ma qabno, haddii la yidhaahdo sidoodii ha loo fikiro hana loo dhaqmo waxay noqonaysa dib-usocodnimo dhibteeda leh.
Xigmadda ka danbaysa jiritaanka Illaahay waa baahi aadanuhu u qabo awood sare oo isaga ka xoog wayn oo dhibka ka dul qaada noocuu doono ha ahaadee, xal deg-deg ahna keenta, Illaah la baryo wixii la garan waayana umuuro isaga u gaar ah loo qaato, waana xigmadda dhammaan diimuhu ku dhisan yihiin taaso odhanaysa aadanaha garashadiisa iyo awooddiisa jidh ahaaneed kuma filna wuxuuna u baahanyahay xoog haga una gargaara, haddii gargaarkaasi iman waayo oo baryada, calaacalka iyo ducadana la aqbali waayo wax jawaab ahna Illaahay laga waayo maxay tahay sababta lagu sii aamineyo laguna sii baryayo? Sababtu uu u jirey hadday meesha ka baxdo masii jireyo.
Waxaa waajib ah in xeerarka iyo falalka uu ku kaco waynahani ay ka wanaagsanaadaan oo ka qumanaadaan kuwa dadka, ka warran xeerarka Illaahay iyo falalkiisa ama wuxuu dooneyo iyo jidkuu u marayo haddii ay kuwa aadanuhu ka wanaagsanaadan? Xagee loo kacayaa?
Illaahani inay aadanuhu is addoonsadaan ayuu jideeyey (ملك اليمين), dadkuna waa mamnuuceen oo danbi iyo xadgudub xuquuqeed ayay ka dhigeen, aadanuhu maanta Illaahay waa ka naxariis badan yihay oo marka dhib dhaco dadka dad kale oo insaanimadu ku wayn tahay baa u kaca. Illaaha Quraanka sharciyaadiisa bahalnimo ee xadhkaha goostay ayaad ka dhex arkaysaa wajiga dhabta ah ee Ilaaha Islaamka, markaad akhrido aayadaha amna axaadiista faraya dhagax ku dilka qof nool, gacmaha iyo lugaha is dhaafka loo gooyneyo… Ma is waydiisay haddii sharciga Illaahay keenay ka wanaagsan yahay keena Maxaa loo waayay waqtigan aynu joogno dad dhaqan galiya xeerarka Quraanka ku jira ee aan soo xusnay? Maxaa keenay in loo arko ciqaab arxan darro ah oo gafka qofku ku dhacay aan u qalmin? Miyayna caddayn in dadku ka naxariis bateen Ilaaha diimaha Ibraahimiyada ee Isku tilmaama inuu ugu naxariis badan yahay kuwa naxariista.
QORMO LA XIRIIRTA: Ilaahay ma daalin baa?
Dhibka aduunka ka jira ama jiritaanka belaayada adduunka maanta ka dhacda ee dhaca, dilka, kufsiga, xanuunka iyo gaajadu waxay dood gelineyaan jiritaanka Illaahay. Jiritaanka dhibkaas waxa ka dhalanaya waydiimo odhanaya;
A: Illaahay ma waxbuu ka qaban kari waayey waxa dhacaya?
B: Illaahay ma isagaa raali ka ah oo qorsheeyey in dhibkani dhaco?
C: Illaahay hadaanu dhibka innaga dul qaadeyn maxaynu u caabudeyna? Illaahay bad-baado ayaan ka rabnaa haddiise laga waayo uma baahnin.
Hadii aad diinta lafteeda eegto waxaad ogaan in garashada cidda ka dhex hadlaysay quraanka ay aad u liidato, Illaahay maanta hadduu rabo inuu qof dilo wuxuu ku sababayaa qof kale, qofka wax dileyaa si uu amarka samaawiga ah u fuliyo Illaahay wuxu u soo direya Shaydaan fidneeya.
Illaahay waxaa ciidan iyo awood u ah dhulgariirka, dabaylaha, dufaanada iyo geerida. Dadka maanta nool waxay og yihiin asbaabta ay waxaasi u dhacaan iyo meelaha ay ku badan yihiin iyo weliba saadaalinta goorta ay dhacayaan, sidaa darteed awoodahaas Illaahay sheegtay waxay burinayaan jiritaankiisa maadaama sababta iyo goorta ay dhacayaanba la sii ogyahay oo ayna jirin wax fara-galin dibadda ah.
Illaaha dhabta ahi ma garan waayeen dhulka uu isagu sameeyey inuu kubbad oo kale yahay ee aanu fidsanayn, Illaaha dhabta ah sidoo kale ma garan waayin in aanay qorraxdu god ku dhicin.
Nabi Maxamed wuu ku guul darraystay inuu caddayn la yimaado oo xujjo ku qanciyo carabtii Quraysheed, mar walba oo ay mucjiso waydiiyaan si ay nabinimadiisa u rumaystaanna isagoo fara-madhan ayuu ku soo laaban jiray, mararka qaarna Ilaahiisa ayaa aayado hanjabaada oo uu ugu goodinayo kuwa caddaynta waydiiyay soo dejin jiray.
Maxammed hortii qorraxdu bari bay kasoo bixi jirety kadibna galbeedka aduunkay u wareegi jirtey, saw ma haboonayn in nebigu Illaahay ka codsado inuu qorraxda galbeed ka keeno ama muddo cayyiman la maqnaado oo mugdi la galo si loo aamino?
Sidee suurta gal ku tahay in Maxamed cirka dameer baalal leh ku tago iyadoo aanay jirin gebi ahaanba cirka uu sheegay ee albaabada leh ama saqafka oo kale ah.
Suuragal miyay tahay in Illaahay qof siiyo hanti badan mid kalana faqri ku dilo? Waa la isku kiin eegeyaa in Illaahay ku jawaabo ma cadaalad baa? Oo Illaahayoow maxaad aniga iigu eegeysa qof aad wax siisay inuu aniga wax isoo tuuro?Illaahayow sidaad wax ii siisay maxaad dadkoo dhan u siin waydey? maxaad aniga iigu eegeysa adoomahaaga aad gaajada ku dishey iyo faqriga? Illaahay waa inuu dhex inoo ahaada si siman wax inoo siiya deeqdiisuna dadka gaadha haday dhici waydo cadaaladdarona timaado uma baahnin xaqna maaha inan u hogaansamo mana jiri karo Illaah noocaa u dhaqma oo hadana dhamaan sifooyinka wanaagga ah leh.
Illaahay uma baahna waxna u tari mayso inaan caabudno, Illaahay wuxu hadana leeyahay waxaan idinka iyo jinnka idiin abuurtay inaad i caabudaan oo keliya. Illaahay hadaanay waxba u tarayn cibaadadeenu muxuu inoo amray inaan caabudno? Ciyaartaada ma rabo umana baahni hadana waxaan ku samaystay ama kuu soo gatay inaad ii ciyaarto, bal is waafajiya labada?
Illaahay hadduu jiro uma baahdeen inuu dadkiisa isku diro difaacna kaagama baahdeen, dadka dhiiggooda daadi kuma dheheen isaga ayaa ka adeegan lahaa, kuwa diidan jiritaankiisana isaga ayaa la xisaabtami lahaa.
Aminaadda aad aaminsantahay jiritaanka awood sare ama Illaah waa tuhun ku dhisan garasho la’aan iyo fulaynimo yaraantaadii lagugu beeray. Hadii aad ku dhiirato inaad ka dooddo jiritaanka Illaahay oo aad sanduuqa kasoo baxdo ha odhan kitaabkayga ayay ku qoran tahay, kitaabkaagu waa ka cadaynta loo raadineyo.
Illaahayada diimaha ku qoran in aanay jirin diimaha laftoodaa caddayn u ah, waana isku day ay sameeyeen rag iyo haween waayo hore noolaa, maantase aan soconayn.
Suurtagal ma tahay in nebiyadu Illaahay ka been sheegeen oo aanu cidna soo dirin Illaah kor joogaa? Waydiintan jawaabteeda isaga ayay u taal, una malayn maayo inuu ka aamusi lahaa kuwa magaciisa dad iyo duunyaba ku rogey.
Dunidan aynu ku nool nahay ku dhowaad shan kun oo ilaah ayaa lagu caabudaa lagana aaminsanyahay, ilaahyadaas qaarkood dhoobo ayaa laga sameeyay, qaar dhagax, qaarna geed halka kuwa dahab laga sameeyo sida kuwa Hindida. Qoramadan waxaan xoogga ku saari doonnaa ilaaha Ibraahimiyada oo kamida Ilaahyada aan muuqan ee qaar kamida diimuhu aaminsan yihiin. Ilaaha diimaha Ibraahimiyada marka aan leenahay...
W/Q: Khaled Hassan 18th July 2018
Nabi Maxamed yaa loo soo diray?